Madaxweynaha Kenya oo booqday magaalada Dhoobley (Sawirro) | RBC Radio
Madaxweynaha Kenya oo booqday magaalada Dhoobley (Sawirro)
Nairobi (RBC Radio) Madaxweynaha dalka Kenya,Uhuru Kenyatta ayaa Sabtidii shalay booqasho aan horay loo sheegin ku tagay magaalad Dhoobley ee gobolka Jubadda Hoose oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya.
Uhuru wuxuu ku sheegay booqashadan inay u ahayd mid taarikhi ah,asagoo la hadlay inta uu joogay ciidamada Kenya ee ku sugan degmada Dhoobley oo ku taalla xadka Kenya iyo Soomaaliya.
Diyaarad nooca qumaatiga ku kacda ah ayaa ka dejisay madaxweynaha Kenya saldhigga ay ciidamadiisa ku suganyihiin ee degmada Dhoobley,ciidamada waxaa ay qayb ka yihiin howlgalka nabadeynta Soomaaliya ee AMISOM.
Madaxweynaha Kenya ayaa inta uu ku gudajiray booqashada wuxuu xirnaa dharka milateriga,maaddama uu yahay taliyaha guud ee maliteriga ,wuxuu ammaanay ciidankiisa ku sugan xadka,asagoo marka sheegay in ciidanka Kenya ay si naf-hurnimo ah u guddanayaan waajibaadkooda, una difaacayaan dalkooda hooyo.
“Joogitaankiina Soomaaliya, wuxuu bad baadiyay nafaf badan, dadka kenyan ah waligood way idinku faani doonaan, joogitaankiina halkan waxay ugu yaraan dadka ka qaaday cabsidii al-Shabaab”.ayuu yiri madaxweyne Uhuru Kenyatta oo la hadlayay ciidamadiisa.
Madaxweynaha Kenya waxaa kalo uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay kala hadlayaan muhiimada inay dhistaan ciidamadooda Milateri, si ciidamadiisa ay dalkooda ugu laabtaan, taasoo ah qeyb ka ah buu yiri istiraatiijiyadooda ay uga baxayaan Soomaaliya.
Booqashadan waxaa lugu sheegay madaxweynaha inuu ku dhiirigalinayay ciidanka Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM,sidoo kale war ay baahisay warbaahinta gudaha ee Soomaaliya ayaa lugu sheegay dowladda Soomaaliya inaysan war u heyn booqashada qarsoodiga ah ee madaxweynaha Kenya uu shalay ku tagay degmada Dhoobley oo Soomaaliya ka tirsan.
Dowladda Soomaaliya wali kama aysan hadlin booqashadan oo ku soo aadaysa xilli la filayo madaxweynaha dowladda dhexe ee Soomaaliya inuu booqasho rasmi ah ku yimaado magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya.